जलविद्युतको शेयर बजार कुलमानको पुनरागमनले उकालो लाग्ला त ? Nepalpatra जलविद्युतको शेयर बजार कुलमानको पुनरागमनले उकालो लाग्ला त ?
जलविद्युतको शेयर बजार कुलमानको पुनरागमनले उकालो लाग्ला त ?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेसँगै शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन् । उनको पुनरागमनले जलस्रोत कम्पनीहरुमा थप सुधार हुने र शेयर कारोबारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले उत्साहित भएका हुन् ।
त्यतिबेला विहार वोर्डसँग सम्झौता पनि गरिएको थियो । यसले गर्दा कतिपय खेर जानसक्ने सम्भावना भएका ऊर्जाहरु भारतमा सप्लाई गर्न सफल हुने लगानीकर्ताले आशा गरेका छन् । जसले गर्दा पूँजीबजारमा पनि यस क्षेत्रको कारोबार राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको हो ।
कम्पनीहरुले हाल करिब ३० प्रतिशत ईक्विटी र ७० प्रतिशत बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गरिरहेको अवस्था छ । तर यस्ता कम्पनीको ईक्विटी र कर्जाको अनुपात ५०/५० प्रतिशत गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिँदै आएका थिए ।
यसरी कर्जालाई केही घटाउने बित्तिकै कम्पनीको खर्च घट्छ । यस्तो खर्च कम हुँदा लगानीकर्तालाई फाइदा हुन जाने शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष अर्याल बताउँछन् । यस्ता समग्र कारणले पनि जलस्रोतमा लगानी गर्नेहरु उत्साही भएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि गत बुधबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पदबहालीपछि विद्युत प्राधिकरणको सेवालाई अझ राम्रो बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । दोस्रो इनिङ स्वीकार गरेर उनले प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा आएकाले चुनौती स्वीकार गरेको बताएका थिए ।
उनले अनियमिताबारे गुनासा आएको र सुशासन तथा गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास समेत दिलाएका थिए । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ममता थापाले लेखेकी छन् ।